Encibilikayo Lyophilized Usilika Fibroin - China Simatech
Lo mkhiqizo ungagcina esitebeleni izinyanga ezingaphezu kuka-18 ekamelweni lokushisa. Isixazululo usilika ezivuselela ayiguquki kwesakhiwo inguqulelo khono kusukela ikhoyili okungahleliwe andα-Helix isakhiwo β-ishidi isakhiwo njengoba yasekuqaleni usilika isixazululo.
Alternative igama: Freeze-omisiwe usilika fibroin
Elikhulu yamangqamuzana isisindo kasilika fibroin e ikhambi aqueous zingahlungwa zibe ezahlukene nezakhiwo okuqinile impahla. Ngeshwa, ikhambi kasilika ukuhlanzwa kungagcineki noma zithutha isikhathi eside njengoba usilika asitholayo izinguquko ezihlelekile futhi lokubolekwa ngenxa ukuntengantenga thermodynamic. nokuphathelene lyophilized usilika Umkhiqizo wethu ukuxazulula ngokuphelele lezi zinkinga kanye kasilika lyophilized kungenziwa oncibilikiswe amanzi noma sesikhashana ngesikhathi emakamu eliphezulu, lula ngokucubungula izinto nomfula.
Usilika Lyophilized e umfuma ingilazi presents ukuba isiponji ezimhlophe ukungena nakwamanye amazwe. Kusukela isitsha ivaliwe ngokuphelele, usilika lyophilized kungaba sizinzile isikhathi eside (> izinyanga ezingu-18) ekamelweni lokushisa ngokuya ukubukeka, solubility, yamangqamuzana isisindo ukusatshalaliswa futhi isakhiwo. I ezivuselela isixazululo kasilika ayiguquki kwesakhiwo inguqulelo khono kusukela ikhoyili okungahleliwe futhi α -helix isakhiwo ukuze β -sheet isakhiwo njengoba usilika isixazululo yokuqala, okuyinto ebalulekile ukulungiselela takhiwo okuqinile impahla.
Ithebula 1 sepharamitha, ukuhlolwa kanye indlela lyophilized kasilika fibroin
Sepharamitha, Ukuhlola kanye Indlela Lyophilized Usilika Fibroin
Ifomu ejenti Lyophilized
Iphakheji 20 ML penicillin Amabhodlela
Indlela wesitoreji Elondolozwe endaweni eyomile, endaweni umoya ekamelweni lokushisa
Isixazululo lokuhlushwa ngemva rehydration ≤ 40%
isisindo Yamamolekhula ≥ 200,000 Da
O peration indlela:
Lyophilized usilika fibroin kungenziwa ligcinwe ngaso ekamelweni lokushisa izinyanga ezingu-18. Ngaphambi ukusetshenziswa, amanzi noma sesikhashana noma isixazululo yeseli / izidakamizwa kungenziwa sesingezwa oyinyumba ingilazi ibhodlela usebenzisa isipetu inaliti (ukugcina uphawu) noma pipette (ibhodlela evulekile). I lyophilized usilika ikhekhe egabheni kungenziwa ngokushesha rehydrated ukwakha ukukhanya isixazululo ophuzi kanye lokuhlala kasilika etholwe ongafinyelela afinyelela ku 30-40%.
Kuyefana ikhambi ngemva uhlanzekile, the encibilikayo lyophilized kasilika fibroin lungasetshenziswa njengendlela material eziyisisekelo zokusetshenziswa for ukuzakhela imikhiqizo eminingi bezokwelapha. Ngaphezu kwalokho, encibilikayo lyophilized usilika fibroin has izinzuzo eside futhi isitoreji kuma, zokuthutha kulula nokugxilisa ingqondo ephakeme solution ezivuselela uqhathanise usilika fibroin njalo isixazululo.
Previous: Ngo Situ Owenza Usilika Fibroin Gel Kits
Okulandelayo: Usilika Fibroin ulwelwesi
Lyophilized Usilika Fibroin
Lyophilized Usilika Fibroin Powder
Lyophilized Usilika Fibroin Amaphrotheni
Lyophilized Usilika Fibroin Amaphrotheni Powder
Lyophilized Usilika Amaphrotheni
Lyophilized Usilika Amaphrotheni Powder
Encibilikayo Lyophilized Usilika Fibroin Powder
Encibilikayo Lyophilized Usilika Fibroin Amaphrotheni
Encibilikayo Lyophilized Usilika Fibroin Amaphrotheni Powder
encibilikayo Lyophilized Usilika Amaphrotheni
Encibilikayo Lyophilized Usilika Amaphrotheni Powder